That's so good, right?: After Art
ကျွန်တော့်နာမည်က 'ပိုင်စိုးဝေ'ဖြစ်ပါတယ်။ 'ပိုင်ပိုင်'လို့လည်း သူငယ်ချင်းတွေက ခေါ်တတ်ကြတယ်။ ဒီ Big Apple မှာတော့ လူမျိုးခြား သူငယ်ချင်းတွေက Andy လို့ခေါ်ကြတာပေါ့။ မြန်မာပြည်မှာ ဆယ်တန်းလောက်အထိ ကျောင်းတက်ပြီးမှ ဒယ်ဒီတို့ရှိရာ ဒီတိုင်းပြည်ကို Hotel Management ဘာသာ ရပ်ဖြင့် အထူးပြုဘွဲ့ယူဖို့လိုက်လာခဲ့ခြင်း။ ဘာကြောင့်ဆို မြန်မာပြည်မှာ ဘိုးဘိုးတို့ မိသားစုလုပ်ငန်းကို ဦးစီးဖို့ရယ် ဟိုတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဝါသနာပါတာရယ်ကြောင့်လေ။
အသွင်အပြင်ကို သိချင်ရင်တော့ပြောပြပါ့မယ်။ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတွေက ဘီလူးကြီးတဲ့။ ဒီမှာတော့ အတော်အသင့် ကြံ့ခိုင်သူ စာရင်းဝင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထွားကြိုင်းသူဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ Gym ကိုအနည်းဆုံး နှစ်ခေါက်လောက်ရောက်ရမှ စားဝင်အိပ်ပျော်ပါရဲ့။ မျက်နှာက နုနု ခန္ဓာကိုယ်က ထွားထွား ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကို ရည်ညွှန်းတဲ့ စကားလုံးက ဘာပါလိမ့် ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူး။
တစ်နေ့တော့ ကျောင်းက Art class တွေမှာ မော်ဒယ်လ်လုပ် ပေးဖို့ ရဲရင့်စွာ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ nude model အဖြစ် လေ။ လူ တွေကြားထဲ ထင်ပေါ်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောချင်နေ တာလား? ကျောင်းက ဘောလုံးအသင်းရဲ့ ကပ္ပတိန်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် အမျိုး သမီးတွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖျားမှာ ရေပန်း စားပြီးသားဆိုတော့ထပ်ပြီး လှုပ်ရှားဖို့ မလိုအပ်ဘူးထင်ပါရဲ့။ အ၀တ်မပါ ကိုယ်ဟန်ပြခြင်းဟာ ဦးနှောက်သုံးဖို့မလိုဘူး၊ ခေါင်းစားဖို့အကြောင်းအရာမရှိ။ သေချာတာက ကျောင်းတက် တာ ငွေအတော်ကုန်တာလေ။ အိမ်ကိုလည်း ပြန်မတောင်းချင် အချိန်ပိုင်းပြင်ပအလုပ်ကျတော့လည်း မလုပ်ချင်သေးတာပါ ပါရဲ့။ ဒါကြောင့်ကျောင်းချိန်တွေရဲ့ တစ်ချို့သောကာလလေး တွေမှာ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းပါ။
ဆိုရရင်တော့ ပထမဆုံး class တစ်ခုမှာ ကိုယ်ဟန်ပြခြင်း အတွက် ဘာပြဿနာမှ မပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ jock-strap လေး တစ်ထည်ဝတ်ပြီး တစ် ယောက်မှ ကျွန်တော်မသိတဲ့ ထဲကို ၀င်သွားခဲ့တယ်။ သူတို့အားလုံး အနုပညာကြမ်းပိုးရုပ်တွေ. ..အဲ...ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကို သဘော ပေါက်ရဲ့လားမသိ။ အတန်းထဲက ဘယ်ကောင်မလေးကမှ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ပစ္စည်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မကြည့်ကြပါဘူး။ ဟီး... .အဲဒါကြောင့် ရုတ်တရက် အခန့်မသင့်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်မလား စိုးရိမ် နေဖို့ မလိုခဲ့ဘူးလေ။
အတန်းချိန်တစ်ချိန် ကိုယ်ဟန်ပြပြီးနောက် ပန်းချီနည်းပြဆရာမ ခေါ်သလိုပြောရရင် ကျွန်တော့် 'cover up' ကိုအသင့်ပြောင်းပြီး သွားပြီ။ အားလပ်ချိန်ခဏလေးပေးလို့ ကျွန်တော်ခုံတစ်ခုမှာ အသာထိုင်နေတုန်း အရပ်ရှည်ရှည် အညိုရောင်ဆံနွယ်တွေနှင့် နှစ်လိုဖွယ် ဘဲတစ် ပွေ အခန်းထဲလှမ်းလာတယ်။ ဒီကောင့်ကို campus ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရမ်း မိုက်တဲ့ကောင်ပဲ။
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် မေးခွန်းထုတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထပ်ထပ် ပြန်သတိပေးရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ ကောင်မလေးတွေစိတ်ထဲ အမြဲရှိ နေတတ်တဲ့ အချိုးကျရုပ်ပုံငယ်လေးအတိုင်း အစစ်အမှန် ပါပဲ။ 'အရပ်ရှည် ဘော်ဒီမိုက် ရုပ်ခပ်ချောချော' ဆိုတာမျိုးလေ ဆို တာမျိုးလေ။ သူ့ဆံနွယ်တွေက လုံးဝအညိုရောင်အရင့် မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ဝေ့၀ဲကျနေတာ။ ၀တ်စားထားတာက ခပ်ရှုပ် ရှုပ်ဒီဇိုင်း။ မျက်ဝန်းတွေက ခပ် ညို့ညို့ရယ်။ အပြုံးတွေက အရသာရှိပါ့ စားသုံးရတာ။ သူ့ပခုံးတွေက ခပ်ကျယ်ကျယ်။ နောက်ဘက်ကကြည့်လိုက်ရင် ပြန့်ကားနေရော။ တီရှပ်ဝတ် ထား တဲ့အတွက် သူ့တွေကလည်း ထင်ရှားလှပေါ့။ အခန်းထဲ ၀င်လာတဲ့ သူ့ခြေလှမ်းတွေနှင့်အတူ 'သူသည်လည်း အားကစား သမားတစ်ယောက်ပဲ' လို့ အတွေးဝင်မိရသလို 'ဒီဘော်ဒီမျိုးရဖို့ Gym ကိုအတော်သွားထားတဲ့ပုံပါလား' ဆိုပြီး သဘောကျရတယ်လေ။ သူ့ကိုကြည့်နေရင်း ကျွန်တော့် ပေါင် ကြားက ညီဘွားက မာလာတော့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာလုပ် နေ ရတယ်ဆိုတာ သတိပြန်ကြပ်မိပြီး စိတ် ထိန်းဖြစ်ရပါတယ်။
'Ok everyone' နည်းပြဆရာမရဲ့ အသံပေါ်ထွက်လာမှုက ကျွန်တော့်ကို ထိတ်လန့်မှုဖြစ်စေပါရဲ့။ ပေါင်ကြားက ညီဘွား အရမ်းမာတောင် နေချိန်ကိုး။ 'စဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလား Andy?' သူမရဲ့ အတန်းချိန်တစ်ခုကို ကျွန်တော် ဒီနေ့လုပ်ဖို့ စိတ်ကူး နေမိဆဲမှာပဲ သူမကအဆင့်ဖြစ်ပြီ လားတဲ့။
ပိုပိုပြီး အထိတ်တလန့်ဖြစ်မိရတယ်။ ကျွန်တော်ဘာများလုပ်မိ နေခဲ့ပြီလဲ? Art class ထဲမှာ ထိုင်မရထမရဖြစ်နေသော ကျွန်တော်ရယ်လေ။
'Uhh,' ကျွန်တော်ပြောဖို့စကားတွေ ထစ်ကုန်ရပါပြီ။ 'ကျွန်တော် စကားခဏပြောလို့ရမလား? အရင်ဆုံးပေါ့'
'I'm sorry, အတန်းမစခင်ပြောရမှာ ဆရာမကို၊ ဒါပေမဲ့ ဆရာမ ဆီစောစောလာတွေ့ခွင့်မရခဲ့လို့' အ၀တ်တဘက်လေးတစ်ခုရှိ လို့တော် သေးတယ်။ အဲဒါလေး ခါးကိုပတ်ပြီးထိုင်ခုံကနေထ လိုက်ကာ သင်တန်းနည်းပြထိုင်နေတဲ့ ခုံဆီသွားလိုက်တာ ခုံစွန်း အမြင့်လေးက ခါး အောက်ပိုင်းကို ကာထားလို့တော်သေးရဲ့။
'Oh sure Andy. သင်တန်းသားတွေ ခဲတံချွန်နေတုန်းပါ။ ဒီနေ့ ကောက်ကြောင်းဆွဲကြရုံသက်သက်။ မင်းအဆင်ပြေရင်တော့ တစ်ခါ တည်း အချောသတ်မှာလေ။ မနက်ဖြန်တော့ charcoal သုံးပြီး မင်းဘော်ဒီပုံရိပ်မျိုးစုံကိုဆွဲကြမယ်ပေါ့။ ခဏနားပြီးရင် တော့ မင်းကူညီ နိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ'
သူမရဲ့ ပြောစကားများကြောင့် နည်းနည်းနေသာထိုင်သာဖြစ် သွားတယ်။ သူမကျွန်တော် ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရင်... သိလိုနည်းပါး ဖြစ်သွားသလားမသိ။
ကျွန်တော် သူမရဲ့စားပွဲရှေ့က ခုံမှာထိုင်နေမြဲ။ သူမကျွန်တော့် ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကာ ထိုင်နေရာဆီလှမ်းလာရင်း စကားစမြည် ပြောပါရဲ့။ 'အားလုံးအိုကေတယ်မဟုတ်လား? မနေ့တုန်းက မင်းအားလုံးအဆင်ပြေပြေပြီးသွားခဲ့တာပဲ။ ငါမင်းစိတ်အပြောင်း အလဲ တစ်ခုခုမဖြစ်ဘူး လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ကွာ။ ငါသိပါတယ် ကျောင်းသူတွေရဲ့ရှေ့မှာ nude ပို့စ်အနေနဲ့ နေရတဲ့အခက် အခဲကို။ မင်းအဲဒီလိုနေဖို့ အိုကေ သေးတယ်ဟုတ်?'
'Thanks God!' နောက်ဆုံးတော့လည်း ပေါင်ကြားကထောင်ထ နေတဲ့ ညီဘွားက ပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီလေ။ မြင်လိုက်ရတဲ့ ဘဲက နည်းပြနဲ့ စကားနည်းနည်း ပြောပြီး ဘယ်ပျောက်သွားတယ် မသိ ကျွန်တော့်မြင်ကွင်းမှာ ကြာရှည်မရှိတော့တာ ကံကောင်း တယ်။ ဒီလူဘယ်သူ ပါလိမ့်? ကျွန်တော် ကိုယ်ကျွန်တော်ပြန် မေးကြည့်မိတာပေါ့နောက်တစ်ခါ။
'Uhh...no, I'm ok' ဘာစကားလုံးကို အလိမ္မာသုံးပြီးဖြေရှင်းရ မလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန် တိုက်တွန်းရတယ် ခပ်မြန်မြန်။ 'ကျွန်တော် အတန်း ချိန်ဘယ်လောက် များများ ဒီလိုကိုယ်ဟန် ပြပေးဖို့ လိုဦးမလဲ မေးချင်နေတာဗျ။ အရင်တုန်းက ဘယ်သူမှ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ် အပိုင်းတွေကို အသေး စိတ်မှတ် တမ်းမတင်ဖူးဘူးလေ'
'Oh သေချာတာပေါ့' သူမကခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်လုပ်ပြရင်း ထောက်ခံ စကားပြောတယ်။
'ကိုယ်တို့ မင်းကို6sessions လောက်အသုံးပြုကြမယ်။ အတန်းချိန်တစ်ခုပြီးတိုင်း မင်းအတွက် ၀န်ဆောင်ခကိုရမှာပါ။ အရင်အပတ်က ငါမေ့သွားတယ်။ မင်းခွင့်လွှတ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါရဲ့။ ဒီနေ့အတန်းချိန်ပြီးရင် မင်းကိုပေးဖို့ ချက်ခ်နှစ်ခု ရှိပါတယ်ကွ'
ကျွန်တော် ခေါင်းငြိမ့်ပြရင်း မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပန်းချီဆွဲခန်းထဲဝင်သွားလိုက်ကာ ခါးမှာပတ်ထားတဲ့ တဘက်ကို ဖယ်ရှား လိုက်တော့တာပေါ့။ အဦးဆုံးနေ့တုန်းကလိုပဲ ရူပါသိပ် မလန်းတဲ့ စော်တစ်ချို့ဆီက တိုးတိုးတိတ်တိတ်ရယ်သံကိုကြား ဖြစ်အောင် ကြားမိ သေး။ သူတို့ဘာတွေးထင်လည်း ကျွန်တော် ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဟီး....အခု ကျွန်တော်ဂရုစိုက်နေတာက အညို ရောင် ဆံနွယ်ခွေတွေနှင့် ဘဲအကြောင်းတွေးပြီး ပေါင်ကြားက ညီဘွားခေါင်းထောင်မထလာရေးကိုပါပဲ။
အတန်းချိန်တွေ အတော်များများကို ရုတ်တရက် အခန့်မသင့် ဆိုတာတွေမဖြစ်ဘဲ သုံးလေးနာရီကောင်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ အတန်းချိန်တွေတစ်ခုပြီးတိုင်း အဆင်ပြေပြေဖြစ်ရခြင်း အတွက် ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ရတာအမောပါ။ ဟိုဟို သည်သည်လျှောက် တွေးနေပေမယ့် အညိုရောင်ဆံနွယ်တွေ နှင့် အရှေ့တိုင်းသားရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်ဘဲကတော့ ကျွန်တော့်ကို စိတ်ရိုင်းဝင်စေဆဲပါ။ ကျောင်းကို အသစ်ထပ်ရောက်တဲ့ အုပ်စု ထဲကပဲဖြစ်မှာပါ။ ပန်းချီနည်းပြစီလျှောက်လှမ်းသွားတဲ့ သူ့ တင်ပါးနှင့် ပေါင်တံတွေဟာ အတော်လှပသား။ ကျောင်း ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့မြို့လေးမှာ တစ်ခါဖူးမျှ မမြင်စဖူးသူ့ကို။
အတန်းရှေ့ကိုယ်ဟန်ပြ ထိုင်နေချိန် ထနေချိန်အတောအတွင်း သင်တန်းသားတွေကိုအကြည့်မစူးစဖူးဘူး။ လေအေးပေးစက် က လေ လှိုင်းတစ်ချက်အဝေ့မှာ အနောက်စွန်းစွန်းက အညို ရောင်ဆံနွယ်တွေကို ကင်းပတ်စတစ်ခုရဲ့ အနားသတ်အဖြစ်မြင် ရချိန်မှာ ကျွန်တော် အကြည့်ရွှေ့လိုက်တယ်။ သူ.....သူ ကျွန်တော့်ကို စူးစိုက်ကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့.... ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို အတိ အကျ သပ်ရပ်စွာ မှတ်တမ်းတင်နေသပေါ့။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် မျောလွင့်သွား တဲ့ ကျွန်တော်သူ့အကြောင်းတွေးလိုက်တာနှင့် မြေပြင်ပေါ် ခြေထောက်တွေ ထိခတ်မိရတာ မိနစ်တိုင်း။ ကျွန်တော်သိချင် နေမိပြီ သူ့ကိုကြည့်လိုက်တိုင်း ဘယ်အရာက စိတ်လှုပ်ရှား နေစေသလဲ ကျွန်တော်.....ထားပါလေ ကျွန်တော်ဘာကိုတွေး နေတယ် ဘာကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာ ငယ်ငယ်ကတည်းက နေ အခုထိ ပြောမပြခဲ့ဘူး။ ကိုယ်လိုချင်နေတဲ့အရာကို အရမ်း မျှော်လင့်ပြီးမှ မရခဲ့ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံကို ငယ်စဉ်ကရခဲ့ဖူးသည် မဟုတ်လား။ ပြီးတော့ အခုကျွန်တော့် စိတ်ထဲ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်မှု တွေကြုံနေရသလားလို့။ အတန်းချိန် တစ်ခုပြီးတိုင်း သူ့ဆီ အကြည့်တွေရောက်မိတိုင်း ပိုပိုသေချာလာရပါတယ်။
ဘာပြဿနာမှ မဖြစ်ဘဲ အတန်းချိန် (၅) ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ အတန်းချိန် (၆)မှာတော့ ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်လာရပြီ ကျွန်တော့်အတွက်။ ဘာကြောင့်ဆိုဒီအတန်းချိန်ဟာ နောက်ဆုံး တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိနေတာကြောင့်ရော ပါမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခပ်တိုးတိုးလေးဖွင့် ထားတဲ့ piano တီးလုံးသံလေး ကြောင့် စိတ်ထဲမှ တစ်ဆင့်အတန်းချိန်ကို အဆင်ပြေစွာ ဖြတ် သန်းနိုင်ခဲ့ပါရဲ့။
တစ်နာရီ အချိန်ပြည့်လို့ နာရီဝက်အဆုံးသတ်မှာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ သူတို့ခဲတံ၊ ခဲဖျက်၊ပစ္စည်းပစ္စယတွေကို သိမ်း ဆည်းစ ပြုကြပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ ပုံဆွဲစာရွက်များကို အိတ်ထဲအ လိုက်သင့်တွဲချိတ်ထည့်ကြပါပြီ။ လူတိုင်း ဒါပေမဲ့ အညိုရောင် ဆံနွယ်တွေနှင့် လူကလွဲ ရင်လေ။ သူက ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာ ကို ကြည့်ကာ အသေးစိတ်ခြယ်မှုန်းနေဆဲ ကျွန်တော်ရင်ခုန်စ ပြုလာတယ်။ သူနှင့် နှစ်ယောက်တည်း အခန်းထဲမှာ ကျန်ခဲ့ရ လျှင်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ကြာရှည်ထိန်းနိုင်ပါ့မလား ကြောက်မိပါရဲ့။ ကျွန်တော် သူ့ရှေ့မှာ -ီးမတောင်ချင်ဘူး။ သူဟာ စိတ်ရှုပ်စေတဲ့လူ။
နည်းပြက သူ့စားပွဲခုံရှိရာမှ လှမ်းအော်ရင်း စကားပြောတယ်။ 'ဆရာမသွားပြီးနော် ။ ပြီးလုနီးပြီလားJohn? မင်း အကြမ်းထည် ဆွဲထား တာက လုံလောက်ပါပြီ။ detail ဖြည့်ဖို့က Andy မရှိ လည်းရလောက်ပြီမဟုတ်လား? သူ ဒီနေ့ကိုယ်ဟန်ပြတာ လုံ လောက်ပြီလေ'
'ကောင်လေးတွေ နောက်ဆယ်မိနစ်ဆို studio ကပိတ်တော့မှာ နော်။ လုပ်စရာအလုပ်လေးတွေ လက်စသပ်တော့'
'အိုကေ....နက်ဖြန်မှတွေ့မယ်။ Andy မင်းအတွက်နောက်ဆုံး check ကဒီမှာနော'် သူမစားပွဲပေါ်က ဖန်တုံးအောက်ကို ညွှန်ပြ ပါတယ်။
'Thank you again, မင်းအကူအညီက အံအားသင့်ဖို့ကောင်း တဲ့ အနုပညာမြောက်တွေပဲ'
ခဏနေတော့ အခန်းထဲက တဒေါက်ဒေါက်နှင့် ထွက်သွားတဲ့ သူမ အခန်းတံခါးကို ငြင်သာစွာပိတ်လိုက်သံကို ကြားလိုက်ရ ပါတယ်။ ဒီတော့မှ ဆိုတဲ့လူဆီက စကားပြောသံ ကြားရပေါ့။
'ဗျာ??' သူဘာကိုပြောချင်တာလည်း ကျွန်တော် မပေါက်ဖူး ဖြစ်နေတယ်
'Excuse me?' သူကျွန်တော့်ကို အစပျိုးကစားပြီထင့်။ ပုံဆွဲ စက္ကူကိုကြည့်လိုက် ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး စူးစိုက်ကြည့် လိုက်လုပ်ပြီးနောက် ပုံဆွဲခုံကနေ ကျွန်တော် ကိုဟ်ဟန်ပြ မတ်တပ်ရပ်နေရာကို လှမ်းလာတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ငပဲ ကို လှမ်းကိုင်လိုက်တာ သူ့လက်ထဲ တဖြည်းဖြည်း မာပြီးကြီး လာရပေါ့။
'ဒါပိုကောင်းတယ်' ကျွန်တော့်ငပဲတဖြည်းဖြည်းမာလာတာကို သူ့လက်အစုံနှင့် သေချာခံစားတယ်။ 'အတန်းချိန်တလျှောက် လုံး မင်းငါ့ ကိုကြည့်နေတာ သိတယ်'
'မင်းတို့ straight boy တွေက မရနိုင်တဲ့ဟာကို အမြဲလိုချင် ကြတယ်'
'ယောက်ျားတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် မိန်းမတစ်ယောက် ဘာပဲ ဖြစ်နေနေ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး နောက်ဆုံးတော့။ မင်းမရနိုင်ဘူး သိလေ လိုချင်လေပဲ။ ပြီးတော့ ငါသိတယ် မင်းငါ့ကိုလိုချင် နေတာ'
အမိန့်အာဏာသံဆန်ဆန် သူ့အသံ tone က ကျွန်တော့်ကို မခံချင်စိတ်လိုလို ဘာလိုလို ခံစားရစေပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်း မှာပဲ အဲဒီ အသံက ပိုပိုပြီး သိချင်စိတ်ပြင်းပြစေတာ ကျွန်တော် က သူ့အတွက် တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် သူဟာ ကျွန်တော့်ကို တစ် ခုခုများ....။
'ပြော မင်းငါ့ကိုလိုအပ်နေတယ်၊ မင်းဟာ ငါ့အတွက် အားလုံး ဆိုတာ...'
'ပြောလေကွာ မင်းငါ့ကိုလိုချင်နေတယ်လို့ မင်းလိုချင်တာရနိုင် သားနဲ့'
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က လုံးဝပြောမထွက်။ မပြောဖြစ်ရုံ လေး..။
သူပါးစပ်ကို အသာဟလိုက်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို သွင်းလိုက် တယ်။ ပူနွေးနေတဲ့အတွေ့အကြောင့် မမာ့တမာကနေ အလျား ပြည့် အနံ ပြည့်ကျောက်သားဆိုင်အလား မာတောင်လာပါပြီ။ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကြားညှပ်ထားရင်း ပြုံးလိုက် ကာ 'Say it' တဲ့။
ကျွန်တော်အသံထွက်ပြောဖြစ်ဖို့ တုံ့ဆိုင်းနေဆဲ။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ အခုဖြစ်ပျက်နေတာနှင့် ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်နေ တာအပေါ် shock ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ သူဘာလုပ်နေတယ်၊ ဘာ တွေကို ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပေးနေမိတယ်ဆိုတာရော။ လိင်စိတ်ခံ စားမှု ကျွန်တော့်သာယာ မှုကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် မဆုံးဖြတ် နိုင်ဆဲ။
'Say it' သူကျွန်တော့်အမြှောက်တံကို သူ့ပါးစပ်ထဲရောက်နိုင် သမျှရောက်အောင်သွင်းသလို လက်ချောင်းတွေနှင့်လည်း ကစားရဲ့။ တစ်ချိန်တည်းမှာ အထက်အောက် ပွတ်သပ် လက်ကစားပေးသလို ပါးစပ်ကလည်း တပြွတ်ပြွတ်စုပ်မှုတ်ပေး နေတာဗျ။ ဘယ်မိန်းကလေး တစ် ယောက်မှ ဒီလိုကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင် ကျွန်တော့်ကိုမပြုစုပေးဖူး ဘူး။ 'ပြောနော် ဒါမှ မဟုတ်ရင် ငါရပ်လိုက်မှာ' ကျွန်တော့်ကို ခြောက် လှန့်ရော။
ကျွန်တော် ဘာမှမပြောဘဲ ငြိမ်နေတော့ သူဆက်မလုပ်ဘဲရပ် ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ ပစ္စည်းပစ္စယ တွေကို သိမ်းဆည်းရင်း studio က ခွာဖို့ဟန်ပြင်တယ်။
'မင်းကိုလိုနေတာကြာပြီ။ ပထမနေ့မြင်စကတည်းကပါ၊ မင်း ငါ့ငပဲကို ဆက်ပြီးစုပ်မှုတ်ပေးတာကို လိုချင်ပါ တယ်..... မင်းပါးစပ်ထဲကို ပန်းထည့်ချင်တယ် အရည်တွေ....I want'
မဆင်မခြင်စကားလုံးတွေလို့ပြောလို့ရမလားမသိ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ ထိန်းသိမ်းတာတွေဘာတွေ အဝေးရောက် ကုန်ပါပြီ။ သူထွက် သွားတော့မလားထင်လိုက်မိပေမဲ့ ကျွန်တော်ကံ ကောင်းပါတယ်။ ခံစားရမှုတွေကနေ ကယ်တင်ဖို့ သူပြန်လှည့် လာပါရဲ့။ ခဏနေက လုပ် ဆောင်ပေးသလို လက်တစ်ဖက်က ငပဲကိုပွတ်သပ်လှုပ်ရှားပေးရင်းနှုတ်ခမ်းအစုံကလည်း ပညာကုန် သုံးစေရင်း။ ကျွန်တော့်ကွမ်းသီးခေါင်း က အရည်ကြည်တွေစိမ့် ထွက်လာတာအများအပြားဖြစ်နေသလို သူသည်လည်း ဘောင်းဘီရှေ့ပိုင်းက ဇစ်ကွဲထွက်တော့မယ်။
တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အကြည့်တစ်ချက်စုံလိုက်မိပြီး နောက် နှစ်ဦးသား studio ရဲ့နောက်ဘက် အ၀တ်လဲခန်းထဲ ငြင်သာစွာတွန်း ထိုးလှုပ်ရှားရင်း နေရာရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့အ၀တ်အစားတွေကို အမြန်ချွတ်ပစ်လိုက်တာ သူ့ဒစ်ကအမြှောက်ကြီး အတိုင်း ဖြစ်နေရဲ့။ ကိုယ့်နှလုံးခုန်သံ ကိုယ်ကြားမိရအောင် ဒိန်းကနဲဖြစ်သွားမိပေါ့။
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်အံ့သြမိတာခဏတော့ကြာတယ်။ ပေါင်ကြားက လုံးဝန်းရှည်လျားတဲ့သူ့ပစ္စည်းက ကျွန်တော့်ကိုဆွဲဆောင်မှုပြင်း နေတာ ကိုး။ ခါတိုင်း pussy များလိုနုညံ့မနေပေမဲ့ ကိုင်ရတာ သွေးခုန်နှုန်းတိုးစေပါရော။ မရဲတရဲ လက်နှင့်အသာဆုပ်ကိုင် လိုက်ပြီး ခပ်ဖြေးဖြေး ထုပေးဖြစ်တယ် အစတော့။ နောက်တော့ ခပ်သွက်သွက် မြန်မြန်ပေါ့လေ။
နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ တုန့်ဆိုင်းမိပေမဲ့ ပန်းသွေးရောင် သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလွှာတွေထဲ သွင်းလိုက်ပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ငပဲ ကိုအရသာခံခဲ့သလို သူကျွန်တော့်ကို ပေးခဲ့ တဲ့ဖီလင်မျိုးပေးဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြည့်မိတာပေါ့။ အစက ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို တပြွတ် ပြွတ်စုပ်မိတယ် နို့သီးခေါင်း တွေကို ကလိသလိုမျိုး။ နောက်တော့ သူရဲ့အတင်းဖိကပ်လာ မှုကြောင့် လည်ချောင်းထဲထိရောက်ကရော။ ခပ်ဖြေးဖြေးလှုပ် ရှားမှုလုပ်ကာ ပါးစပ်ထဲ အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးတာကြောင့် ခဏအကြာမှာပဲ ကျွန်တော့် အာခံတွင်းထဲ ပျစ်ချွဲချွဲအရည် တွေ ပန်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ ချွေးစက်လေးတွေ ခိုသီးနေတဲ့ သူ့ မျက်နှာကိုကြည့်ရင်း ရောင်မှားကာ သူ့အရည်တွေမျိုချလိုက်မိ ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့သော အရည်တွေဟာ နှုတ်ခမ်းဖျားက လျှံ ကျလာရပါတယ်။ ကျွန်တော်လက်ခုံနဲ့သုတ်လိုက်ပြီး မတ်တပ် ရပ်လိုက်ကာ သူ့မျက်ဝန်းဆီ အကြည့်ရွေ့ ရှေ့ဆက်ဘာလုပ် ရမှန်းမသိ ငြိမ်နေမိရော။
'မင်းအလှည်'့ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ သူ့လက်တွေဟာ မာ တောင်နေဆဲ ကျွန်တော့်ငပဲကို ကိုင်တွယ်ပါတယ် ခဏတာ။ မိနစ် အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့် တင်ပါးတွေ ခရေပွင့်တွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငြင်သာစွာ ကိုယ် တွယ်ရင်း ကစားတယ်။ ဘာမှ.....ဘာမှပြင်ဆင်ချိန်မရသေးဘူး အဲဒီကိစ္စအတွက်ဆိုရင်တော့။ သူဘာဆက်လုပ်မလို့ပါလိမ့် နော်။ ကျွန်တော့်ရည်းစား ကောင်မလေးတွေတောင် မကိုင်စဖူး။ အား...သူ့မျက်နှာကို ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေရှိရာကိုအပ်လိုက်ပြီး လျှာပူပူနွေးနွေးကြီးကိုထုတ်ကာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို ရစ်ဝိုက် ကစားတယ်။ ကြက်သီးတွေတဖြန်းဖြန်းထကာ ကျွန်တော့်ငပဲက ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ခါနေရော။ ခပ်မာမာ လျှာဖျားလေးက ခရေ ၀ကို ကလိတယ်။ အလုပ်နှစ်ခုကို သူတစ်ပြိုင်နက်တည်းလုပ် နေတာ ၀ါသနာထင်ပါ့။ သူ့လက်ခလယ်ကို တံတွေး နှင့် စိုစွတ် နေဆဲ ခရေ၀ထဲ ဖိသွင်းရင်း အသွင်းအထုတ်လုပ်သလို အခြား လက်တစ်ဖက်ကလည်း ငပဲကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ ထု ပေးပါတယ်။ အစပိုင်းက ခပ်နှေးနှေးပေမဲ့ ခဏအကြာမှာတော့ မြန်သထက်မြန်။
ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းက တိုးတိုးလေးသာ သဘောတူဖြစ်ပေမဲ့ သူ့ အကြင်နာအပြုအစုကြောင့် တင်ပါးတွေကိုကျစ် ခါးကိုကော့ ခေါင်းကို မော့ကာ အားရပါးရပန်းထည့်လိုက်မိပါရောလေ။ ရင် တွေ တဆတ်ဆတ်ခုန်တဲ့အထိ ကျေနပ်စိတ်ဖြစ်သွားမိသလိုပါ ပဲ။ သူ့နှုတ်ခမ်းစိုစိုစွတ်စွတ် ကို ခဏငေးဖြစ်ရင်း အတွေ့အကြုံ သစ်ကြောင့် ကျွန်တော်ရှက်မိပြန်တယ်။
'ငါ့တိုက်ခန်းမှာ ဒီတစ်ပတ်အတောအတွင်း ကိုယ်ဟန်ပြပေးနိုင် မလား? သီးသန့်ပေါ့။ တနင်္လာနေ့ကျရင် မင်းကို လုပ်မယ်'
တိတ်ဆိတ်စွာငြိမ်သက်နေမိတဲ့ ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေ ကို သူကမေးခွန်းတွေနဲ့နှိုးဆွလိုက်တယ်။ အလုပ်အကိုင်သစ် ..... ကျွန်တော်တို့အတွက် အလုပ်အကိုင်သစ်အဖြစ် သူရွေး ချယ်လိုက်ပြီထင်ပါ့။
ကျောင်းက အနုပညာအတန်းချိန်တွေမှာပဲ ကိုယ်ဟန်ပြဖို့ဆုံး ဖြတ်ထားပေမယ့် အခုတော့ အနုပညာမြောက်ပန်းချီကား ဖန်တီးဖို့အတွက် ကျွန်တော်ကူညီကိုယ်ဟန်ပြရမယ်။ ဟင်း.... သက်ပျင်းခဏခဏချမိပေမဲ့ မငြင်းဆန်လိုက်မိပါ။
Studio တံခါးကိုသော့ခတ် အစောင့်ကြီးလက်၌အပ်ကာ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာဖြစ်တယ်။ ပလက်ဖောင်းတလျှောက် ကောင်မလေးတွေ ကောင်ကလေးတွေကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော့် စိတ်ထဲအခုမှ လူပျိုဘ၀ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့ အိမ်ထောင်သည် ပေါက်စရဲ့ ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ် ခံစားမိပါတယ်။
တိုက်ခန်းလှေခါးကတစ်ဆင့် ခပ်သွက်သွက် ကျွန်တော့်အခန်း ကိုတက်လာမိစဉ်ခဏ ပထမထပ်ထောင့်ချိုးအရောက် လူတစ် ယောက် ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ရင်း ရယ်ဟဟ....။
Note: ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး အပျင်းပြေစေဖို့ပြန်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။